ओलीलाई परास्त गरिछाड्ने भीम रावलको दाबी ,सांसदबाट राजीनामा दिने घोषणा - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार ओलीलाई परास्त गरिछाड्ने भीम रावलको दाबी ,सांसदबाट राजीनामा दिने घोषणा
नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले आफू सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताएका छन् । पार्टीभित्रको विवादका कारण माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका छन् । यही बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, उनले उनी विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए । उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत खसेको थियो भने विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर सांसदहरु भने तटस्थ बसेका थिए ।
उता, भीम रावलले पनि आफू सामूहिक राजीनामाको पक्षमा रहेको बताउँछन् । उनले अब आफूहरु अध्यक्ष ओलीसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै तत्काल सामूहिक राजीनामा दिएर एउटा निकास दिने विश्वास दिलाएका छन् । उनले ओलीलाई परास्त गर्नुको विकल्प नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा रावलले भने–‘केपी ओलीलाई परास्त गर्नुपर्छ । उहाँले संविधान र उपलब्धि नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नुभएको छ । अब हामी यत्तिकै बसेर हुँदैन् । मेरो मत त सामूहिक राजीनामा नै हो । हामी तयारी अवस्थामा छौं ।
Previous articleएकै दिन चार हजार बढीले जिते कोरोना
Next articleनिषेधाज्ञाका समयमा बिहे भोज चलाउने बेहुला पक्राउ
काठमाडौँ महानगरपालिकाको ताजा मतपरिणाम ( बेलुका ९:४५ को अपडेट )